Ngwọta ọgwụgwọ 36 mee onwe gị - Afrikhepri Fondation
sunday, Febrụwarị 28, 2021
36 Ngwọta Ọgwụgwọ Ọgwụgwọ Na-eme Ka Onwe Gị
Na-agụ: 15 min
Lọ ọdịnala Afrịka ọdịnala bụ ịdọ aka na ntị zuru oke nke gụnyere iji ọgwụ ahịhịa obodo eme ihe kpamkpam yana akụkụ ime mmụọ nke Africa.
1 / ABCES
Na-etinye etuto ahụ site n’oge ruo n’oge iji mee ka mmanụ a honeyụ chachaa
Tinye na etuto nke yabasị esi nri dị ka ihe ọkụkụ
Tinye na etuto nke pounded kabeeji epupụta dị ka poultice iji gwọọ ma gwọọ ha
Tinye ata tonip puree weere na mmanụ oliv dị ka poultice na etuto maka mgbu mgbu.
2 / ANEMIA
† Were ụtụtụ na afo efu, 1 tablespoon mmanụ aṅụ na-agbakwunye 2 spoonfuls nke ihe ọṅụṅụ lemon
† Na-eri nri karọ ụtụtụ kwa afọ
Were decoction nke 100 g nke mgbọrọgwụ pasili ọhụrụ maka 1 lita mmiri, thenụọ ihe ọctionụ thisụ a na ọnụego tii iko 3 kwa ụbọchị n'oge nri.
† Rie 100 g grated beetroot na 150 g carrots kwa ụbọchị
3 / akpịrị
† Na-echekwa ihe ọṅụṅụ mmiri lemon dị ọcha maka ndị okenye
Gargle na nnu nnu iji kpochapụ akpịrị
† Crush kabeeji epupụta, wepụ ihe ọṅụṅụ na-eme gargles
Ichaa ma rie nri ginger
4 / ụkwara ume ọkụ
Il Sie 2 tablespoons nke chopped yabasị na mmiri maka nkeji 3, wee mee ka mmiri mmiri na-esi na mmanụ a honeyụ pụta. Were iko ụtụtụ na afo efu na onye ọzọ na mgbede
Were ọkara iko kọfị na-ekpo ọkụ ma ọ bụrụ na ụkwara ume ọkụ apụ
Row Tụba mint ole na ole n'ime lita mmiri mmiri. Kpuchie ma mee ka ọ dị omimi maka nkeji ole na ole. Were iko n'ụtụtụ na anyasị (maka ndị okenye)
Il Obụpde ụfọdụ mmanụ habbat sawda wee kuo ume na uzuoku a na-ewepụta ya kwa ụtụtụ na anyasị, na-agbakwunye ngaji nke mmanụ mkpụrụ ojii ka a gwerie ya loro ya n'ụtụtụ na n'anyasị kwa, tupu nri. Withhịa aka n'ahụ gị na olu gị na mmanụ habbat sawda tupu ị lakpuo ụra.
5 / MGBE NA NWA
† Na-etinye ihe ọṅụṅụ lemon na ọnyá iji hichaa ha, lemon bụ ezigbo antiseptic
Jiri ihe nkiri dị mkpa nke na-ekewa ọkwa ọ bụla nke yabasị ahụ dị ka ihe mgbakwasa aseptic ozugbo na ọnya ahụ, kpuchie ya na gauze ma mechaa akwa ahụ.
† Tinye mmanụ aṅụ na ọnya (mmanụ aṅụ bụ ezigbo ọgwụgwọ)
Kụchaa ma ọ bụ gwerie galik ole na ole ma tinye ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ na ọnya ndị ahụ.
Maka ọkụ na-ere ọkụ, jiri nwayọọ ghee ọkara nduku ma tinye ọnya ndị ahụ. Nọgide na-eme nke a ruo mgbe ihe mgbu ga-ebelata.
† Ghichaa mmiri oyi na ọkụ ahụ, ma ọ bụ tinye akpụrụ mmiri ọtụtụ minit.
Gwakọta mmanụ oriri na yabasị esi nri ma tinye dị ka poultice (maka obere ọkụ)
† Ọ bụrụ na nrịbama mbụ na-ere ọkụ, mee otu mpempe akwụkwọ na chi chi leaves (Kani) ma tinye aka na ọkụ ahụ.
7 / HAIR FALL
Jiri mmiri lemon kpuchie isi ahụ, hapụ nkeji iri na ise wee kpochaa ya na champoing, hapụ ya ka ọ kpoo, werezie mmanụ mmanụ habbat sawda (nigella) kpuchie ụra tupu ị lakpuo izu abụọ.
† Mee ngwakọta nke yabasị, nnu, na ose ma tinye na mpaghara gị n'isi.
† Tinye yabasị ihe ọ juiceụ twiceụ ugboro abụọ n'ụbọchị
Mee ihe ngwọta nke akwukwo nduku na mmiri ma tinye n’isi. (na-akwalite ntutu isi)
8 / ntachi
† Na-a everyụ kwa ụtụtụ mmiri ara ehi na-enweghị ihe ọ ofụ anụ nke nwere ngaji ngaji na ngaji ihe ọ lemonụ ofụ lemon na ½ liter mmiri
Were 1 ngaji nke mmanụ oliv na mgbede tupu ị lakpuo ụra, na otu iko mmiri keara inara thetụtụ n'ụtụtụ mgbe ị na-ebili.
† Bee okra green (Kandja) n'ime obere iberibe ma sie mmiri mmiri nke e nwetara n'ụtụtụ ma n'ehihie
† Were ụra nke ụtụtụ n'ụtụtụ 2 spoonfuls mmanụ aṅụ.
Mee decoction nke ụyọkọ Cassia epupụta. italica (Laidour) + mkpụrụ nke Tamarindus indica (Dakhaar) + ntakịrị mmiri, drinkụọ decocté. . Dose: nnukwu iko (ihe dị ka 150 ml) tupu nri ụtụtụ. Oge ọgwụgwọ: ụbọchị 1-3
9 / KWURU N'UGWU
† Tinye mpi a gweriri ya ma ọ bụ iberibe galik na mpi ahụ, debe ya agbụ kwa ụbọchị ruo mgbe mpi ahụ dara (kpachara anya, tinye galik naanị na mpi ahụ, agabigala mpi ahụ)
Debe ụkwụ gị na mmiri keara keara minutesara maka nkeji ise wee debe opi ahụ
10 / DINAL PAIN
Ghichaa anụ ahụ nke galiki ruo ebe mgbu ga-akwụsị.
† Tinye owu bọọlụ tinye ya n’ime yabasị ihe ọ juiceụ inụ n’ime oghere na-egbu mgbu.
† Richaa ọnụ gị na decoction nke clove (khorompole)
† Obụpde teaspoon nke mkpụrụ nke nigella (nke a na-ahụ maka mmanya) n'ime ½ iko mmanya, ma mezie ọnụ
Pound akwukwo akwukwo uto ma gwoo ya na mmiri oku, mechaa saa mmiri.
† Chew chili maka nkeji ole na ole (ọ bụ naanị maka ndị okenye)
11 /afọ ọsịsa
† Maka afọ ọsịsa na ụmụ ọhụrụ, nye 3 eyịm chopped na 1 liter nke esi mmiri ruo awa 2, wee mee ka infusion ahụ dị ụtọ tupu ị nye ya ka ọ drinkụọ na obere.
† Were ½ iko ihe ọṅụṅụ lemon na ½ teaspoon kọfị
Il Obụpde saa karat na mmiri nnu. Azọpịa wee ka guzo n'ihu na-a drinkingụ. (nwa: obere ngaji; Okenye: 1 iko, 3 ugboro n'ụbọchị)
† Obụpde 15 g nke guava epupụta na 1 liter mmiri, wee rie ya niile n'ụbọchị.
Mee decoction na ngaji abụọ nke Cochlospermum tinctorium (Fayar) ntụ ntụ na lita mmiri 2. Obụpde 1 nkeji oge, nje na-a drinkụ 15 iko 1 ugboro n'ụbọchị.
12 / eczema
Tinye mmanụ habbat sawda (nigella) n’ebe a kpasuru iwe.
With Jiri karọt grated na-ekpuchi ebe ahụ kwa mgbede tupu ị lakpuo ụra. Jiri akwa jide ya. Buru n'abali. A ga-eme kwa mgbede ruo mgbe mgbake zuru oke.
13 / ike ọgwụgwụ
† Were otu nnukwu iko mmiri kwa ụtụtụ na-amịkọrọ ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, ha niile na mmanụ a .ụ.
Massage tinyere spain na ude mmiri.
† Na-aṅụ otu iko tii na lemon ihe ọṅụṅụ sweetened na mmanụ aṅụ.
† Ihe ọ theụ†ụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ agwa pods na-a drinkụ
Iri kwa ụbọchị na afo efu 1 iko mmanya oroma a gwakọtara na 1 tablespoon nke mkpụrụ mkpụrụ ojii maka ụbọchị 10.
14 / ahụ ọkụ
Jiri mpịakọta akwụkwọ fụchie ya na mmanya.
Ghaa akwukwo lemongrass, kee ya agbụ ma sie ya na lita 2 mmiri, wee nuo ubochi. (maka ndị okenye)
† Tost dry osisi na okra ntụ ntụ na obụpde maka nkeji ole na ole. (Ụmụaka: were 1 3 tablespoon / okenye: were ọtụtụ iko tii n'ụbọchị)
Il Obụpde ọka cobs (Mbook) maka 15 nkeji na 1 liter mmiri ma drinkụọ ihe ọ throughoutụ throughoutụ n'ụbọchị. (maka ndị okenye)
15 / NA-ADX Adịghị Ike Mmekọahụ
Tinye iko 4 nke chopped pasili tii na 1 mmiri ọkụ, wee thenụọ iko 1, otu elekere tupu ị lakpuo ụra.
† Mee ngwakọta nke 30 g nke habbat sawda ntụ ntụ + ¼ liter nke mmanụ a na-agba mmanụ (nigella) + ¼ lita mmanụ oliv + lita mmanụ a¼ụ. Were 1 tablespoon ụtụtụ na mgbede mgbe nri.
16 / flu
† Kwadebe ma na-aṅụ mint lemon
† Ṅụọ mmanya na lemon
Ace Ghichaa nnukwu yabasị a kụrụ nke ọma na ½ lita mmiri na ihe ọ drinkụ drinkụ.
†Ụọ ihe ọ madeụ juiceụ si na mmanụ a rawụ, lemon na yabasị
17 / hemorrhoid
Tinye ogwu ohuru ohuru iji belata ihe mgbu.
Zupụta lemongrass epupụta na lita 5 nke mmiri, werezie sitz saa maka nkeji iri abụọ. (maka ndị okenye)
Were 20 g nke galik maka 40 g mmiri. Obụpde 30 nkeji, iyo, tinye otu ibu nke mmanụ a honeyụ mgbe ahụ were 1 tablespoon n'ụtụtụ na ihe efu afo na 1 tablespoon na ụra tupu ụbọchị 15.
Bido basil, kpoo lemon n'elu ma kpochapu. Tinye karama iko. Nye ihe ọṅụṅụ teaspoon 3 otu ụbọchị.
18 / ọbara mgbali
† Ṅụọ a laurel akwukwo tii n'oge ihi ụra.
Ụọ mmanya galik.
Il Obụpde ọka cobs maka 15 nkeji na 1 liter mmiri, wee drinkụọ ya niile n'ụbọchị.
Il Obụpde nnukwu yabasị na 1 liter mmiri wee drinkụọ ugboro abụọ n'ụbọchị. (ndị okenye)
19 / ehighị ụra nke ọma
Were yabasị ihe ọ onionụ .ụ
Tinye n'ime ½ iko mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ 1 ngaji nke mmanụ habbat sawda na ngaji mmanụ a 1ụ XNUMX mgbe ahụ drinkụọ mgbe ị na-ehi ụra.
Row Tụba mint ole na ole n'ime lita mmiri mmiri. Kpuchie ma mee ka ọ dị omimi maka nkeji ole na ole. Were iko 1 ụtụtụ na anyasị (maka ndị okenye)
Mee ka infusion nke Linden, 20 grs nke okooko osisi maka 1 liter nke esi mmiri. Inye ihe maka 5 nkeji.
20 / Azụ mgbu
Tinye n'ime mmanụ habbat sawda (nigella) kpụ ọkụ n'ọnụ na chilli ntụ ma ọ bụ ose ojii ma tinye azụ.
† Mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri oyi kwa ụtụtụ.
† Iri ugboro 3 n'ụbọchị 1 ọkara ngaji nke mmanụ mkpụrụ ojii
21 / ỌRRO AKWROKWỌ
Mee ngwakọta nke 1 ngaji mmanụ a honeyụ, 1 teaspoon nke butter na 10 tụlee nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon. Rie ihe mgwakota agwa ahụ na obere ngaji.
† Kwadebe sirop site na esi 5 g nke yabasị chopped na 10 ml mmiri maka 100 ruo 200 nkeji. Iyo, tinye 1 ngaji mmanụ a honeyụ na simmer ruo mgbe a ga-enweta mmiri sirop. Were tii 4 kwa ụbọchị.
Sook owu owu na mmanya, mix na ose ma tinye ya n'olu.
† Obụpde 1 teaspoon mkpụrụ Nigel na ½ iko mmanya ma mee ka anya doo.
† Mee ka ọkụ na-ekpo ọkụ nke ginger tinye ya n'olu (maka okenye)
22 / AJ BJ B ỌJỌ
† Chee ole na ole epupụta nke ndụ pasili ma ọ bụ ụfọdụ kọfị kọfị.
† Na-eri mint epupụta
Mee ka e jiri ya na cinnamon mejupụta ya na mmanụ aṅụ
23 / migraine
† Mee mpempe akwụkwọ nke lemon ma ọ bụ tinye mkpụrụ osisi lemon na ụlọ nsọ.
† Tinye compress nke raw eyịm ke ọkpọiso.
† Tinye mint epupụta na 1 liter nke esi mmiri. Kpuchie ma mee ka ọ dị omimi maka nkeji ole na ole. Were iko ụtụtụ na abalị.
24 / anwụnta
† Debe yabasị na 2 n'akụkụ ihe ndina iji gbochie anwụnta.
† Tinye lemongrass n'ime ụlọ ahụ.
† Ebe neem na-etinye n'ime ụlọ ahụ.
25 / KOGR NR N IME
Jiri mmiri nnu dị ike na-asacha imi oge niile.
Were iku ume miri emi n'uwe a kpuchiri na mmiri ọkụ tupu ihi ụra.
† Bee ma tinye ya na saucer ọkara yabasị, tinyezie n'akụkụ akwa. Nke a na-ekpocha imi ma nye gị ohere iku ume nke ọma mgbe ị na-ehi ụra.
Were ume miri emi nke galik a pịrị apị.
Reat Kee ume ruo minit 15 tupu ị lakpuo ụra maka uzuoku mmiri ọkụ.
† Tinye nkedo nke eucalyptus 3-4 n’ime iko mmiri ma tinye n’ime ụlọ.
26 / OTITIS
Iji gbochie ịrịa ọrịa ntị, wunye lemon ole na ole n'ime ntị 2 ruo 3 ugboro n'izu.
† Ịhịa aka na ụlọ nsọ ahụ na mkpụrụ osisi ahụ.
Tinye nkpuru ole na ole nke nkpuru oji ojii nke ọma n'ime ntị.
† Ghichaa galik nke galiki dị mma nke ukwuu na mmanụ oliv ma debe ya n’ọrụ. Tinye 1 ka 1 dobe mmanụ na ntị. (adịghị wunye iberibe galik na ntị, naanị mmanụ)
27 / Whitlow
Esi nri yabasị bulbs, Mash ha n'ime puree na itinye ụtụtụ na mgbede dị ka a poultice.
Tinye mkpịsị aka gị n'ime oghere lemon dị ọkụ.
Finger Mkpịsị aka gbara gburugburu na 1 yabasị gburugburu.
28 / INITE BITE
† Bee otu iberibe lemon ma kpoo ya.
† Tinye nduku na-eme ka a na-agba ya ruo ogologo abalị dum.
Obụpde jikere epupụta maka minit ole na ole, gwakọta ya na mmiri ịsa ahụ wee jiri ya saa ya.
† Weta ihe omimi nke pasili ohuru ma o bu akwukwo pasili akwukwo ozo di na mkpuru aka.
Bee mkpo galiki, bee ya abụọ ma tinye ya na aru ahụ ruo minit ole na ole.
† Tinye ihe ọ juiceụ juiceụ yabasị ka ọ taa gị, were tee ya ruo minit 1 ruo 2.
29 / oyi
Kpoo 10 tụlee nke mmanụ mkpa nke eucalyptus nke ga-sie na mmiri lita 1 maka nkeji 5 ruo 10 otu ugboro kwa ụbọchị. (Mmiri ga-ekpo ọkụ nke ukwuu)
† Obụpde Mint epupụta na mmiri ara ehi na ihe ọṅụṅụ na ụra.
† Nime mmiri nnu dị ọkụ.
Il Obụpde 5 g nke yabasị chopped na 10 ml mmiri maka 100 ruo 200 nkeji, nje, tinye 1 tablespoon mmanụ a honeyụ na simmer ruo mgbe a oké sirop enwetara. Were tii 4 ruo 6 kwa ụbọchị.
30 / RHEUMATISM
† Na-aṅụ kwa ụtụtụ 1 squeezed ihe ọṅụṅụ lemon.
Gwakọta raw, chopped, anuahade, kabeeji epupụta na ụrọ, mee mado wee tinye na nkwonkwo na-egbu mgbu.
† Mee infusion nke 20 g wayo epupụta ke 1 liter nke esi mmiri, ka inye maka nkeji 10. Werezie iko 3 n’ụbọchị ruo izu atọ.
Kwadebe ngwakọta nke galik a gweriri ya na mmanụ oliv ma tee nkwonkwo na-egbu mgbu.
† Tinye ihe ọṅụṅụ nduku na ebe ndị akpịrị.
† Ọhịa aka na-egbu mgbu na ntụ ntụ.
31 / LEGWLE IH N
† Jiri akwa swab tinye ya na ihe ọṅụṅụ lemon.
Inye yabasị ọhụrụ ịmịkọrọ ma outụọ mmiri ya site n'oge ruo n'oge.
Eggs Ọkpụkpọ nsị na ntụ na-eme ntụ, fesịa ntụ.
32 / ụkwara
† Jiri okpokoro 4 nke mmanụ a laụ lavender mee nkwadebe site na ịtinye mkpo galik a gbanyere mkpọrọgwụ, mgbanaka eyịm a gbanyeworo agbachapụ, radish n'ime iberibe. Kwụsị awa 4 ruo 5 wee gbakwunye ole na ole nke lemon ma drinkụọ ihe sirop a.
† Were ngwakọta nke ginger na mmanụ aṅụ 3 ugboro n'ụbọchị.
††Ụọ tea osisi na-ekpo ọkụ nke mmiri, lemon na 1 ngaji mmanụ a honeyụ mejupụtara.
† Ṅụọ otu iko mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ + 1 spoonful mmanụ aṅụ.
Were ihe ọ garlicụ juiceụ galik na mmanụ a honeyụ n'ụtụtụ na anyasị.
Were ube galik 5, gwerie ha ma jikọta ya na mmiri 1 lita. Obụpde ruo mgbe ị nwetara ọkara mmiri mmiri. Drinkụọ mmanya. (ụmụaka n'okpuru 3: 1 teaspoon ọ bụla 3 awa. / overmụaka karịrị 3: 1 tablespoon ọ bụla 3 awa.)
33 / ULCERE GASTRO DUODENAL
Gri ma ọ bụ paụnd akpịrị akwụkwọ, tinye mmiri ma drinkụọ.
† Na-aṅụ mmiri ara ọkụ (iko 1 kwa awa maka otu izu)
† Rie akwukwo
34 / INTESTINAL Worms
Iji lụsoo ụdị idide nile nke eriri afọ ọgụ, rie galik n’afọ na-adịghị na ya kwa ụtụtụ.
† Iji chịkwaa pinworms, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ lemon n'ụtụtụ.
† Were 60 g nke carrots esiri ụbọchị gụnyere 30 ga, maka ụbọchị 21. (maka ndị okenye)
† Na-emegide pinworms, na-azọpịa lemon pips na mmanụ aṅụ kwa ụtụtụ na efu afọ.
35 / akaghi NÁ MMALITE
†Gwakọta ọkara otu lita mmanụ aṅụ, otu ụzọ n'ụzọ anọ nke liter nke mkpụrụ mkpụrụ ndụ ojii, otu ụzọ n'ụzọ anọ nke liter mmanụ olive, 30g nke mkpụrụ nke nigella mkpụrụ: ṅụọ otu tablespoon mgbe nke ọ bụla n'ime atọ nri.
36 / APRODISIAQUE
50 decoction nke ọhụrụ Bissap (Hibiscus Safdariffa)
25 g cinnamon (powdered) (cinnamomum zeylanicum)
35 g ginger (grated) ọhụrụ (zingiber officinale)
Ngwakọta 2 nke snoo mmiri mmiri mmiri
Ihe na-emepụta ihe dị na Bissap, ma ọ bụ ginger na mmanụ aṅụ, ka macerate maka ụbọchị 3.
Na-enyo ihe ọṅụṅụ ahụ ma na-agbanye ọkụ tupu ị na-eje ozi
Na-aṅụ 30 nkeji tupu oge niile gbasara mmekọahụ.
Uru nke mmanụ argan
Papyrus nke Mkpọrọ: Ozizi nke Ptahotep
Etiopia rụrụ ụlọ nlere anya izizi nke East Africa maka telescopes abụọ
Ìhè a n'ime anyị - Krishnamurti (Audio)
Achọpụtara Isis - Helena Petrovna Blavatsky (PDF)